PD ဟဲန်းဒ် ၀င့်ခ်ျ KUANGLOHAKIT LTD.,PART.
PD ဟဲန်းဒ် ၀င့်ခ်ျ
-သေနတ်စည်ပုံစံလိမ့်တုံးကို လှည့်လို့ရတဲ့အစိတ်အပိုင်း အားလုံးမှာ အသုံးပြုထားသည်၊
- အသုံးပြုခြင်းအတွက် အန္တရာယ်ကင်းပြီး ဂီယာကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းအတွက် ကာကွယ်ထားသည်
- ဖွဲ့စည်းပုံသည် ခိုင်မာမြဲမြံခြင်း ကောင်းစွာ အသုံးချနိုင်ခြင်းဖြင့် ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေသည်
- အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး 360 ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်
- 360 ဒီဂရီလှည့်နိုင်ပြီး ကလပ်ခ်ျပုံစံလည်း လှည့်နိုင်သည်
- ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာအပါအ၀င် အမျိုးမျိုးသောနေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်
-လေးလံသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အလျားလိုက်အနေအထားကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာတွင် ကုန်ပစ္စည်း ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ကောင်းမွန်စွာ ဆွဲငင်ခြင်းနှင့် ဆွဲယူခြင်းအရည်အချင်းရှိသည်
- အောက်ခံနဲ့ စခရူကို တင်းကျပ်စွာ တင်ဆင်နိုင်ပြီး အရည်အသွေးမြှင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေ စံချိန်ညီသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံမှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်း မ, တင် ကိရိယာစလိန်း၊ ၀ိုင်ယာ ရုတ်ပ်ကလစ်ပ်၊ တန်းဘက်ခဲကယ်လား၊ လော့ခ်ချိတ်၊ ပိုလီအက်စတာလ်ဝက်ဘ်ဘင်းစလိင်းဂ်၊ ခေါင်းထုတ်ပတ်ကြိုး၊ စတိန်းန်ဝိုင်ယာကြိုး၊ စတိန်းန်စတီးလ်ဝိုင်ယာကြိုး၊ ရာဘာဖုံးစတိန်းန်ဝိုင်ယာကြိုး၊ စတီးလ်သံကြိုး၊ 304 316 ပစ္စည်းမ,ချိန်းလော့ခ်၊ အိုင်းဘရိုး၊ ပစ္စည်းမချည်ထည်ပိတ်၊ ခါးပတ်ချည်ကြိုး၊ ပစ္စည်းချည်ကြိုး၊ ပစ္စည်းမပိုလီအက်စတာလ်ဝက်ဘ်ဘင်းစလိင်းဂ်၊ ပတ်ချည်ကြိုး၊ ပစ္စည်းချည်ကြိုး၊ ခါးပတ်ပစ္စည်းချည်ကြိုး၊ ကုန်တင်ကားပတ်ချည်ကြိုး၊ သံကြိုး၊ ခါးပတ်ကြိုး၊ ညှိချိန်းန်၊ ထရက်ခ်ချိန်းန်၊ ချိန်းန်စပရော့ကက်တ်၊ ဒရိုက်ဖ်ချိန်းန်၊ ကွန်ဗေးရိုးချိန်းန်၊ စပရော့ကက်တ်ချိန်းန်၊ ချိန်းန်ကော့်ပ်၊ လိင်းဂ်၊ စတီးလ်နှစ်ချိန်းကြိုး၊ ပလပ်စ်တစ်ခ်ချိန်းန်ကြိုး၊ စတီးလ်ချိန်းန်ကြိုး၊ အလွိုင်းချိန်းန်ကြိုး KUANGLOHAKIT LTD. G-80၊ တိုင်းဒေါင်းချိန်းန်ကြိုး G-43၊ တိုင်းဒေါင်းချိန်းန် G-80၊ ချိန်းကြိုး G-43၊ ၀ိုင်ယာရုတ်ပ်ပလစ်ပ်၊ ရှက်ကဲလ်စ်၊ ချိတ်၊ ၀ိုင်ယာရုတ်စ်ပ်ကလစ်ပ်တန်းဘက်ခ်ကယ်လား၊ ၀ိုင်ယာရုတ်ပ်ကလစ်ပ်ဆိုတာ ပတ်ချည်၊ လော့်စ် (သို့)ညှပ်၊ စတိန်းန်လက်ဝိုင်ယာကြိုး၊ ကြိုး၊ (သို့) ရာဘာကြိုးစသည့်ကိရိယာပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ KUANGLOHAKIT LTD., PART.
(ကုန်းလိုဟကစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်) ကုန်ပစ္စည်းများကို သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်သည် ချိန်းန်ကြိုး၊ ညှပ်ကလစ်ပ်၊ ရှက်ကဲလ်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းမျိုးစုံနှင် အနှစ် 20 အထက် အတွေ့အကြုံရှိပြီး ဒီထက်မက လက်ကိုင်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်ကုန်ကြမ်းတွေကို ရွေးယူထားလို့ ဈေးနှုန်းချိုသာသည်၊ ရိုးသားသောဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊ ဖေါက်သည်ရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ကုန်ပစ္စည်းများ မ,တင်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုး လက်လီ-လက်ကား ရောင်းချပေးနေပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးသည် လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းကို ရွေးယူအသုံးပြုနိုင်သည်၊ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီဈေးနှုန်းရှိသည်၊ ဈေးနှုန်းက ချိုသာတဲ့ဈေးနှုန်းပါ၊ စတိန်းန်ဝိုင်ယာကြိုးရော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း (သို့) အခြားပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဈေးနှုန်းတွေရော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေပါ အသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဆိုင်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းကို ရှင်းပြရန်ရှိသည်၊ ဥပမာ စတိန်းန်ဝိုင်ယာကြိုး ရိတ်တ်ဈေးနှုန်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာများ ဘယ်လုပ်နဲ့လက်ဖက် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်း မသိနားမလည်သေးတဲ့ဖေါက်သည်များကို ဆွေးနွေးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါသည်၊ ဒီထက်မက ဖေါက်သည်တွေအားလုံး လက်လီ-လက်ကားဈေးနှုန်းဝယ်ယူလို့ရပါသည်၊ ဒါကြောင့် ဖေါက်သည်သည် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့လိုက်ဖက်ပြီး မိမိလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးနှင့် ကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးမြှင့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။
ဒီထက်သာမက အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းတွေ စက်ရုံမှရွေးယူရန်ရှိပါသေးပြီး ထိုကဲ့သို့သော အိုင်းဘရိုး စလိင်းညှပ်ကလစ်ပ်၊ တန်းဘက်ခ်ကယ်လား၊ အလွိုင်း၊ ချိန်းန်ကြိုး၊ ဆွဲငင်၊ ဆွဲယူသည့်ကိရိယာပစ္စည်းသည် အသေးဆုံးဆိုဒ်ကနေ အကြီးဆုံးဆိုဒ်မျိုးစုံရှိသည်၊ စတိန်းဝိုင်ယာကြိုးဆိုဒ်မျိုးစုံ ပစ္စည်းတင်လော့ခ်နှင့် အခြားသောကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး
ပစ္စည်းကိရိယာများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှအဆီယံနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ရောင်းချရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ အဓိကဈေးကွက်ဖြစ်သည့် လာအို၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နာမ်နိုင်ငံစသည်ဖြင့် အခြေခံအသုံးပြုမှုကို ဆွေးနွေးရှင်းပြပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများစိတ်ဝင်စားပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် +662-6396690 (သို့) +6691-234-5689